Huawei dia mampiseho ny OS ho an'ny mpanamboatra lehibe: OPPO sy Xiaomi | Androidsis
Huawei dia mihaika an'i Etazonia sy Google: efa nandinika ny rafitra fiasan'izy ireo i Oppo sy Xiaomi
Zava-misy miharihary fa ny fiakaran'ny fifanenjanana eo amin'i Shina sy ny governemanta tarihin'i Donald Trump dia tsy mitsahatra mitombo. Taorian'ilay veto mampiady hevitra an'i Huawei, izay tsy ho afaka hiantehitra amin'ny singa na serivisy fehezin'ny fitsipiky ny Etazonia intsony, dia nifindra ny ampahany ilay mpamokatra aziatika. Raha ny marina, ny orinasa dia efa niandrandra an'ity veto ity, ary izany no antony niasa tamin'ny rafitra fiasany manokana nandritra ny taona maro. Ny anaranao any Eropa? ARK OS.
raha ny marina, Tsy mazava ny anaran'ny OS an'ny HuaweiFa ny azonay hamafisina dia ny mpanamboatra monina any Shenzhen izay miasa mafy handefa ny OS alohan'ny faran'ny taona. Ny hevitra dia izany ARK OS, na OAK OS mahita ny mazava amin'ny volana Oktobra, mety misy Huawei Mate 30. Nefa mitandrema, ny mpamokatra hafa dia afaka mampiasa ny rafitra fiasan'izy ireo
Xiaomi sy OPPO dia afaka mampiasa ny rafitra fiasan'i Huawei
Ary, araka ny tsiliantsofina farany, mpilalao lehibe roa eo amin'ny tsenan'ny telefaona no mizaha ny rafitra fiasan'i Huawei. Miresaka momba ny OPPO sy Xiaomi izahay, olo-manan-danja roa ao amin'ity sehatra ity ary iza no afaka nanao ny dian'ny ARK OS, izay mety ho mafy noho Google aza. Ho fanombohana, ny mpanamboatra ny Mountain View dia tsy maniry an'io veto io Huawei, satria manimba ny tombontsoany fotsiny izany.
Ary koa, ny hevitra fa Xiaomi sy OPPO koa dia miditra amin'ny laharan'ny Huawei, mampiasa ny rafitra fiasany, dia vaovao mahatsiravina ho an'ny goavan'ny Internet. Ary, raha raisintsika ny toe-tsaina Aziatika, io tsaho io dia azo inoana kokoa, nanampy ny zava-misy fa ny ARK OS dia fork an'ny Android izay mamela antsika hitazona ny fivarotana fangatahana Google, hahafahantsika miditra amin'ireo serivisy rehetra, ao anatin'izany ny WhatsApp , tena ratsy ho an'i Google ny raharaha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei dia mihaika an'i Etazonia sy Google: efa nandinika ny rafitra fiasan'izy ireo i Oppo sy Xiaomi
Antony 3 lehibe no antony hividianana ny Xiaomi Mi Band 4
Ahoana ny fomba handefasana hafatra amin'ireo mpandrava amin'ny Telegram nefa tsy hitan'ny rehetra izany